XOG: Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo leh kulan khaas ah oo ay uga hadlayaan arrimaha xasaasiga ah iyo furitaanka Shirka? | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL XOG: Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo leh kulan khaas ah oo ay uga hadlayaan arrimaha xasaasiga ah iyo furitaanka Shirka? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha XOG: Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo leh kulan khaas ah oo ay uga hadlayaan arrimaha xasaasiga ah iyo furitaanka Shirka?
XOG: Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo leh kulan khaas ah oo ay uga hadlayaan arrimaha xasaasiga ah iyo furitaanka Shirka?
BAYDHABO(P-TIMES)- Hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed & Puntland ayaa leh kulan khaas ah oo ay ka maqan yihiin dhamaan wasiiraddooda iyo Lataliyaashooda, kaas oo ay uga hadlayaan arrimaha kala dhaxeeya dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Hogaamiyaashan oo mudo bilaha ah kala maqnaa ayaa ka wada hadlaya xariirka dawladda Faderaalka, Siyaasadda wadamada Khaliijka ay ka qaadatay, qeybtii ay qaarkood ka noqdeen Ceyrintii Jawaari, duulaamada cusub, Doorashada 2020-ka iyo halka uu ku socda hadda dalku.
Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland dhawaan waxay banaanka soo dhigeen aragtidooda Khaliijka oo ay si cad u difaaceen dawladda Imaaraatka Carabta, ayna cadeeyeen in aysan aqoonin wax la yiraahdo QADAR aysana aqbali doonin in xariirka loo jaro dawladda Imaaraatka.
Koonfur Galbeed, Hirshabeelle & Galmudug ayaa lafilayaa in aysan ka harin saaxiibadooda xagga siyaasadda oo ay aqbalaan dalabka ah in laga xariir furto dawladda Faderaalka, maadaama ay ka leexatay siyaasadda Dhexdhexaadnimada oo ay Qadar si dhameystiran ugu leexatay.
Sidaas oo kale geedi socodka doorashooyinka 2020-ka ee dawladda Faderaalku ay ka mashquushay ayaa kamid ah arrimaha aadka looga hadli doono, waxaana muuqata in ay qodobkaas isku aragti ka yihiin dhinacyadu.
Arrinta ku saabsan duulaanka lagu hayo nidaamka Faderaalka ee ka imaanaya Xaafiisyada Madaxweynaha & Raysalwasaaraha ayaa kamid ah qodobada kale ee ay isku raacsan yihiin dhinacyadan, gaar ahaana ay doonayaan in ay mawqif mideysan ka qaataan.
Shirka ayaa si rasmi u furmi doona berri subax, waxaana inta uu socdo diirada la saari doona qodobada ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin.
La dagaalanka Al- Shabaab iyo wixii ay ka qabatay dawladda Faderaalka
Siyaasadda Dibada iyo soo kala dhaweysashada wadamada Khaliijka.
Dagaalka DFS kusoo qaaday dawlad gobaleedyada oo ay doonayso in ay taladooda wax kuyeelato.
Nidaamka Faderalka oo ay u arkaan in uu ku socdo dhiig-bax lagu bixinayo Malaayiin Dollar si loo abuuro dawlad awood badan.